ईश्वर सम्झने कहिले ?:: Naya Nepal
ईश्वर सम्झने कहिले ?
हस्तिनापुरका राजाको दरबारमा कौरव र पाण्डव पक्षबीच जुवा खेल भयो। खालमा कौरवको जित र पाण्डवको हार भयो। पाण्डवहरूका सारा सम्पत्ति स्वाहा भयो। युधिष्ठिरले चार भाइलाई दाउमा त राखे नै, आफूलाई पनि राखे। द्रौपदी बाँकी थिइन्, उनलाई पनि दाउ थापे। त्यो पनि हारे।
सबै दाउ जितेपछि कौरव पक्षको अहम् बढ्यो। उनीहरूले संसारै जितेको महसुस गरे। कतिसम्म भने दुर्योधनका भाइ दुःशासनले त्यो जुवाहलभरि रहेका मानिसका बीचमा द्रौपदीको वस्त्रहरण सुरु गरे। द्रौपदी आत्तिइन्। राजा धृतराष्ट्रतिर फर्केर सहयोगको याचना गर्दै करुणामय स्वरमा दुवै हात फैलाइन् र भनिन्, ‘हे महाराज, म पनि हजुरकै छोरीजस्तै त हुँ नि।
मेरो ठाउँमा हजुरकी छोरी भए कस्तो लाग्थ्यो ? त्यसैले मेरो वस्त्रहरण गर्नबाट दुःशासनलाई रोक्नुस्।’
द्रौपदीले पटकपटक पुकारा गरिन्, तर राजाले घोसेमुन्टो लगाइरहे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्यसँग पनि यसरी नै अनुनयविनय गरिन्। उनका आफ्नै पाँच पतिहरूले पनि उनको पुकारा सुनेर पनि केही गर्न सकेनन्। दुःशासनलाई रोक्ने आँट कसैले पनि नगरेपछि अन्तिम अवस्थामा द्रौपदीले भगवान्लाई सम्झिइन्। भनिन्, ‘हे कृष्ण, दुःशासनले मेरो वस्त्रहरण गरेर बेइज्जत गर्न खोज्दै छ, रोक्नुस्। हे जगत्पिता म तिम्रै सन्तान हुँ। तिम्रो सन्तानको रक्षा तिमी नै गर। म तिमीमै समर्पित भएँ।’
द्रौपदीले पुकारा गर्नासाथ भगवान् श्रीकृष्णले वस्त्र दिइरहे। वस्त्र तान्दातान्दा दुःशासन बेहोस भएर ढल्यो। द्रौपदी चीरहरण हुनबाट जोगिइन्। उनले सुरुमा पितामह र द्रोणाचार्यसँग पुकारा गरेकी थिइन्, तर कसैले पनि उनको सुरक्षा गर्न सकेनन्। पितामह र गुरु द्रोणाचार्यले दुःशासनलाई द्रौपदीको चीरहरण नगर भनेर रोक्न सक्थे, तर दुवैजना कौरवका अगाडि निरिह हुन पुगे। अन्ततः द्रौपदीले भगवान् कृष्णलाई नै पुकार्नुपर्‍यो।
द्रौपदीले आपत्का बेला आखिरीमा मात्र भगवान् कृष्णलाई सम्झिइन्। उनले त सुरुमा पितामह भीष्म र गुरु द्रोणाचार्यलाई सम्झेकी थिइन्, तर उनीहरूले बचाउन सकेनन्। युधिष्ठिर र उनका भाइहरूले कौरवसँग जुवा खेल्दा एकपटक पनि भगवान्लाई सम्झेनन्। अन्ततः उनीहरूले हार्नुपर्‍यो।
विपत्मा मात्र भगवान् सम्झने आम मानिसको स्वभावै हो। यस्तै बानीले बेलाबेलामा हामी विपत्तिमा पर्ने गर्दछौं। आपत् पर्दा मात्र होइन, अघिपछि खाँदा, बस्दा, उठ्दा, काम सुरु गर्दा पनि भगवान् सम्झने गरौं। जसले भगवान् सम्झिरहन्छ, उसका विपत्ति टरेर जान्छ। भगवान् भक्तलाई सदैव हेर्छन्। द्रौपदीलाई भैंm विपत्तिबाट जोगाउँछन्।
पाथीभराको नाम ‘मुक्कुम्लुङ्’ राख्‍न माग, चन्दा संकलन गरेर आन्दोलनको तयारी
धरान : सरकारले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिर नीजि क्षेत्रको यति होल्डिङलाई जिम्मा लगाएपछि प्रदेश १ का लिम्बू जातिहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले पाथीभरा मन्दिरको इतिहास नामेट गर्ने गरी नीजि क्षेत्रसँग ३५ वर्षे सम्झौता गरी जिम्मा लगाएको भन्दै लिम्बू समुदायले पाथीभरा मन्दिरको नाम लिम्बू भाषामा ‘मुक्कुम्लुङ्’ राख्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । सरकारविरुद्धको आन्दोलन सफल पार्न सबै लिम्बूहरुको जातीय संस्था सम्मिलित एक संर्घष समिति गठन गरी आर्थिक संकलन अभियानलाई तीव्र पारिएको छ ।
सरकारले पाथीभरा मन्दिरको गुरुयोजना तयार गरी विकास विस्तारका लागि यतिसँग सम्झौता गरेपछि लिम्बू समुदाय आन्दोलित भएको हो । सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी पाथीभरा मन्दिरको भोक अधिकार निजि क्षेत्रलाई सुम्पिएको र लिम्बू इतिहासलाई नामेट पार्ने काम गरेका कारण लिम्बू समुदाय संगठित भएर संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
आन्दोलन सफल पार्नका लागि देशभरका लिम्बूहरुलाई संगठित गरी आन्दोलन गर्न ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका श्री लिङखम लिम्बूको संयोजकत्वमा एकसय ३५ सदस्य संर्घष समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले आन्दोलनलाई दमन गर्ने रणनीति लिएपछि संर्घष समितिले ठूलो रकम आर्थिक संकलन गरी ५० हजार भन्दा बढीको संख्यामा पाथीभरामा लिम्बूलाई उपस्थित गराई आन्दोलन कडा पार्ने याजना रहेको संयोजक लिम्बूले बताए ।लिम्बूजातिहरुका विभिन्न जातिय संघसंस्थाहरुले सरकारले यति होल्डिन्ससँग सम्झौता गरे पश्चात लिम्बू समुदाय असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित भएको उनको भनाइ छ ।
किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय सल्लाहकार नरप्रसाद लुङ्फुङ्वाले २०२२ साल अगाडि पाथीभरा मन्दिरको नाम ‘मुक्कुम्लुङ्’ रहेकाले त्यसैलाई कायम नगरे सरकार विरुद्ध शसक्त आन्दोलनको तयारी गरिएको बताएका छन् ।
उनलेलिम्बूइतिहासलाई नामेट पार्ने गरी केपी ओली सरकारले दमनको निति लिएर निजि क्षेत्रसंग गरिएको सम्झौता देशभरका लिम्बू समुदायलाई मान्य नभएकाले आन्दोलनको सुरुवात गरिएको बताए ।
सरकार विरुद्ध आन्दोलन शसक्त पार्नका लागि संर्घष समितिका संयोजक सहितका पदाधिकारीहरुले आर्थिक अभियान चलाई चन्दा संकलन थालेका छन् । संयोजक लिम्बुले लाहुरेहरुको बसोबास रहेको धरानमा हप्ता दिनदेखि लिम्बू संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई भेट गरी आर्थिक संकलन गरेका छन् ।
संकलन गरिएको रकमबाट देशभरका लिम्बूहरुलाई पाथीभरामा भेला गरी सरकार र यति विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने लिम्बू संर्घष समितिका सदस्य दिलकुमार फोम्बोले बताए ।
उनले पाथीभरा विस्तारको नाममा सरकराले नीजि क्षेत्रसँग गलत सम्झौता गरेकाले पाथीभरा बचाउन मुक्कुम्लुङ् संयुक्त संर्घष समिति गठन गरेका बताए । संर्घष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमको नेतृत्वमा सरकार विरुद्धको आन्दोलन सफल बनाउन प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभामा र काठमाडौंमा समेत आर्थिक संकलन सुरु गरिएको छ ।
लिम्बूजातिहरुको छाता संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङ र विभिन्न लिम्बूहरुको जातीय संस्थालाई अगाडि सारेर आन्दोलन थालिएको बताइएको छ ।